Vitec Production Solutions at the BSC Expo – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions
အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions
Litepanels - BSc ကုန်စည်ပြပွဲ Prize ကို Draw
အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးအတွက်မြည်စေရန်, Litepanels တဦးတည်းကံကောင်းဆုရှင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်ကိရိယာအစုံချွတ် raffle ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆုချီးမြှင့်တဦးတည်း Gemini2× 1 ပျော့ panel ကနေ, တဦးတည်း Astra 6x Bi-အရောင်နှင့်တဦးတည်း Sola4+ လငျး Fresnel ပါဝင်သည်။ အွန်လိုင်း entry ကိုအခမဲ့နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်သာအနည်းငယ်အချိန်လေးကြာပါသည်။
ဤတွင် Link ကို: bit.ly/2Fvsjmu
Gemini2× 1 ဖျ Panel ကိုအသစ် Litepanels dual-ဘက်ထရီကွင်းပိတ်
အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာယင်း၏အရာရှိတဦးပွဲဦးထွက်အောင်နှစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-စံ 14.4V ထုတ်လွှင့်ကင်မရာဘက်ထရီနဲ့ Gemini panel ကိုပါဝါမှအသုံးပြုသူများကိုဖွပေးသော, အ All-သစ်ကို Dual-ဘက်ထရီ bracket ကဖြစ်လိမ့်မည်ထမ်းဘိုးကိုထမ်းသို့မဟုတ်အလင်းရပ်တည်ချက်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏အလွန်ပေါ့ပါးပြီးလေယာဉ်ပေါ်ပါ, လှေငြိမ်-အခမဲ့ power supply နှင့်အတူ, Gemini အမြဲ On-တည်နေရာအညွန့်မှာသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ရေနံတူးစင်ဖို့လွယ်ကူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ENG နှင့် ENP applications များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအပါအဝင်ခရီးဆောင်ပါဝါအပှေါအာဏာပိုမိုနှစ်သက်သည်အဘယ်မှာရှိအခြေအနေများအတွက် ပို. ပင်လက်တွေ့ကျတဲ့ပါပဲ။ လာသောအခါဘက်ထရီ-powered သာသူတို့ရဲ့အများဆုံးထွက်ရှိ၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကို generate နိုငျသောယှဉ်ပြိုင် LED ပြား, မတူဘဲ, Gemini ရောနှောအဓိကဘက်ထရီပါဝါကနေ running ရာခိုင်နှုန်းကိုပြင်းထန်မှု 100 အထိမှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Gemini Dual-ဘက်ထရီ bracket ကတစ်ဦးချင်းစီ 90 ကနေရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ထုတ်လွှင့်ဘက်ထရီ onboard Anton / Bauer ရဲ့ Dionic XT အပါအဝင် 190 ဝပ်-နာရီ, အထိအရွယ်အစားနှစ်ခုဘက်ထရီထောက်ပံ့တစ်ဦးရွှေတောင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ် V-တောင်ပေါ်မှာ version ကိုဖြစ်စေများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ bracket ကအထူးသအများဆုံးဘက်ထရီသက်တမ်းသေချာနှင့် Gemini များအတွက်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အာဏာကို output ကိုထိန်းညှိဖို့ဒီဇိုင်းထားပြီး LED နှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ် cable ကိုပါဝင်သည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Litepanels-GeminiBracket.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဆိုပါ Gemini2× 1 ဖျ Panel ကိုများအတွက်နယူး Litepanels dual-ဘက်ထရီကွင်းပိတ်
Litepanels Gemini2× 1 ဖျ Panel ကို
အဆိုပါတိကျမှန်ကန်ပြီးစွယ်စုံ Gemini2× 1 ပျော့ panel ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တစ်ခုစံပြအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မည်သည့်ဘောင်နှုန်းရှပ်တာထောင့်, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်မှုများအတွက်စစ်မှန်သော, တုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့, Full-spectrum ကိုအဖြူရောင်အလင်းထုတ်လုပ်ရန်အနေနဲ့လက်ငင်းမှာ set up နိုင်ပါတယ်။
ခြွင်းချက်အရောင် rendering, Gemini အဆိုပါ 360 ဒီဂရီအရောင်ရောင်စဉ်များတွင်မည်သည့်အရောင်နှင့်အတူမီးထွန်းခြင်းဖြင့် "ရဲရင့်သွားပါ" ကိုအလင်းရောင်ပညာရှင်များနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအလင်းရဲ့လတ်တလော firmware ကို update ကိုအသစ်ကပါဝင်သည် အထူးသက်ရောက်မှုများအသစ်ဂျယ်လ်သည် Modes နှင့်အဆင့်မြင့်ပန်ကာလည်ပတ်။ တစ်ခု All-အသစ်ကအလင်းရောင်သက်ရောက်မှု mode ကိုအရေးပေါ်အလင်းအိမ်, လျှပ်စစ်, ပဲမျိုးစုံအားမီး, စတုရန်းနှင့် strobing ကနေအထိပြောင်းလဲနေသောသက်ရောက်မှုပေးထားပါတယ်။ Gemini အများပြည်သူပီနှင့် On-လေထုအခွက်တဆယ်မီးများအတွက်စုံလင်သောင့် Full-spectrum ကိုအဖြူရောင်အလင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။
အဆိုပါစွယ်စုံ Gemini ရဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပါဝါထောက်ပံ့ရေး built-in ကြောင့်လျော့နည်း cabling လိုအပ်, အလင်းကိုလုံးဝနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြံအဖန်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု-ဖော်ရွေပျော့ panel ကိုသာဘက်ထရီအောက်မှာ Full-ပြင်းထန်မှု, မိုဘိုင်း-powered စစ်ဆင်ရေးကယ်မနှုတ်နိုင် - Anton / Bauer ဘက်ထရီလိုင်းများမဆိုဖို့စံပြအဖြည့် ..
ဓာတ်ပုံစာတန်းများ: Litepanels Gemini2၏ကုန်ပစ္စည်း Shots 1 ဖျ Panel ကို×
OConnor အရည်ဌာနမှူး 2560
ရုပ်ရှင်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်မရာထောက်ခံမှုခေါင်းဆောင်အဖြစ်, OConnor အဆိုပါ 1030D, 2575D, 2560 နှင့် 120EX အပါအဝင် BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာယင်း၏တစ်ခုလုံးကိုအရည်ခေါင်းကို lineup တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ 2560 ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာနှစ်ဦးစလုံးရေနံတူးစင် Setup များအတွက်ဘက်စုံရာပူဇော်သက္ကာကိုဆဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ရွှေ့ဖို့ရိုက်ကူးရေးဖွင့်, အ OConnor အရည်ခေါင်းကိုမိသားစုမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိ 2560 sinusoidal counterbalance နှင့်အတူတကွအကြီးဆုံး payload အကွာအဝေးကျော်ခံစားရ ultra-ချောမွေ့ OConnor ပေးအရည်ဆွဲပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ 2560 (ဘရိတ်အပါအဝင်) ထိန်းချုပ်မှု၏ Cine-စံအနေအထားကမ်းလှမ်းပြီး Front-ကိုင်တွယ်ကင်မရာ၏ထိုးထွင်းသိမြင်, ထိန်းချုပ်ထား positioning ကိုအဖြစ်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ပေါ့ပါးမဂ္ဂနီဆီယမ်အိမ်ရာနှင့် Carbon-fiber အဖုံးများအတွက် mount, စှမျးတနျခိုး အလေးချိန်အချိုးများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ to- ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/OConnor_Fluid-Head-Line-2560.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: OConnor 2560 အရည်ဌာနမှူး
Anton / Bauer Dionic XT ဘက်ထရီစီးရီး
V-တောင်မှာနှင့်ရွှေတောင်ပေါ်မှာ, high-performing နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Dionic XT နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါစဉ်ဆက်မပြတ်အာဏာ 14A မှအပ်နှံနိုင်စွမ်းတဲ့ 12V Li-ion ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Dionic XT90 နှင့် Dionic XT150 - - ဤမြင့်မားအားကိုး, ကြာရှည်ဘက်ထရီလိုင်းနှစ်ခုမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုကူ Ultra-High-အစှမျးသတ်တိကို ABS နှင့်ရော်ဘာဆောက်လုပ်ရေး features များနှင့်ဘက်ထရီကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ပင်အရှိဆုံးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း-စံစွမ်းဆောင်ရည်သေချာ အစွန်းရောက်အပူ, စိုထိုင်းဆများနှင့်အအေးအပါအဝင်တောင်းဆိုအခြေအနေများ, ။ Dionic XT ရဲ့သာလွန်ဆဲလ်နည်းပညာသာလွန်ရွယ်နှင့်နိမ့်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှု overhead များအတွက်ဘက်ထရီယှဉ်ပြိုင်ထက် သာ. များသောကြိမ်အားသွင်းခံရဖို့ဘက်ထရီအားဖွင့်, အမြင့်ဆုံးသံသရာဘဝအတှကျအအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။
Dionic XT ဘက်ထရီဘက်ထရီ-အားသွင်းစနစ် Anton / Bauer ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဒါပေမယ့်လည်းယှဉ်ပြိုင်အမှတ်တံဆိပ် '' အားသွင်းစနစ်များနှင့်အတူ Cross-သဟဇာတဖြစ်ကြပြီးယင်းကဲ့သို့ခရီးဆောင် LED မီးအလင်းရောင်အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း powering ဘို့ထက်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပူဇော်မသာ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Anton-Bauer-Dionic-XT.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Anton / Bauer မှသည်နယူး Dionic XT
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အမင်း-မှတ်အစ်မ OConnor နှင့် Anton / Bauer အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ "ဟု BSc နာယကအဖြစ်, Litepanels, အ BSc ကုန်စည်ပြပွဲ၏တက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရအလင်းရောင်ပစ္စည်းများပြခံရဖို့ကျေနပ်သည်။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲနောက်ဆုံးပေါ်ဂီယာအပေါငျးတို့သ Demo နှင့်အသစ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်သင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ gaffers, ရိုက်ကူးရေး, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထို့ထက် ပို. ပေး, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်သူတို့အဘို့အရေးပါတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ BSc ၏အစိတ်အပိုင်းများမှာအများအပြားဘယ်သူကိုများ - - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရ Gemini ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် DoPs ထံမှအဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်မှကျေးဇူးတင်စကားတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ကျနော်တို့အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဖန်တီးခြွင်းချက်အကြောင်းအရာဖမ်းယူဖို့သူတို့ရဲ့ရှာပုံတော်အတွက် BSc အဖွဲ့ဝင်များကိုထောကျပံ့ဖို့ဂုဏ်ယူနေကြသည် "။
- Dave Dougall အရောင်းဒုသမ္မတ, EMEA နှင့်အာရှပစိဖိတ် - Vitec Group က
Headshot Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/TheVitecGroup-DaveDougall.jpg
ကျနော်တို့ 1,700 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကမ္ဘာတစ်လွှား 11 လူတွေကပတ်ပတ်လည် employ သုံးယောက်ရုံးခွဲများအတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်: Imaging က Solutions, ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်ကို Creative Solutions ။ အဆိုပါ Vitec Group မှ plc £ 2017 သန်း၏ 378.1 ပြုပြင်ဝင်ငွေ * နှင့်အတူလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/190115VitecGroup.docx
BSc ကုန်စည်ပြပွဲ Show ကိုကို Preview
ဖေဖော်ဝါရီလ 1-2, 2019
အဆိုပါ Vitec Group က
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]% 20is% 20heading% 20to%[အီးမေးလျ protected]_EXPO% 20stand% 20315% 20and%[အီးမေးလျ protected]%20is%20raffling%20off%20a%20pro%20lighting%20kit%20to%20one%20lucky%20winner.%20%23litepanels%20%23gemini%20%23antonbauer%20%23dionic%20%23BSC%20%23BSCExpo%20%23gaffers%20%23dop%20%23lightingtech%20%23lighting%20-%20http://bit.ly/2AVW5Of
Anton / Bauer ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BSc ကုန်စည်ပြပွဲ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dionic XT ဘက်ထရီစီးရီး dual-ဘက်ထရီကွင်းပိတ် အရည်ဌာနမှူး 2560 Gemini 2x1 ဖျ Panel ကို ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော LitePanels OConnor လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions	2019-01-15
ယခင်: တီဗီ Cultura ဘရာဇီးမြက်ချိုင့်နှင့်အတူအနာဂတ်ပြင်ဆင်
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ် / မာလ်တီမီဒီယာဒီဇိုင်နာ - လက်ပံဧရိယာဒေသခံများက (အသေးစားစီမံကိန်းများ / အရင်ဖျော်ဖြေ)